Shirka Nuclearka Iran oo ka Furmay Kazakhstan
Wadamada dhanka quwadda ugu horeeya dunida iyo dalka Iran ayaa bilaabay wadahalo soconaya laba maalin oo looga wadaxaajoonayo barnaamijka nuclearka ee Tehran.
Wadahadalada oo maanta oo Jimce ah ka furmay magaalada Almaty ee dalka Kazakhstan, ayaa waxa ay u dhaxeeyaan wadanka Kazakhstan, shanta wadan ee Golaha Ammaanka joogtada ka ah, wadanka Germany iyo Iran.
Afhayeen u hadlay Madaxa Siyaasadda Arrimaha Dibadda ee Midowga Yurub Catherine Ashton, ayaa Jimcadan maanta ah u sheegay wariyayaasha in kooxdu ay rajeynayso in Iran ay ka jawaabi doonto talooyin loo soo jeediyey bishii February. Talooyinkaas oo ay ka mid ahaayeen in ay xirto xarun lagu farsameeyo nuclearka, iyo inay baabi’iso keydkeeda macdanta uranium-ta ee la naaxiyey, taa badalkeedana loo fasaxo Iran in qaar ka mid ah waxsoosaarkeeda ay iibgeyso kuwaasoo ay hadda saaranyihiin cunaqabateyno caalami ah.
Khamiistii shalayna madaxa wadaxaajoodka barnaamijka nuclear-ka ee Iran Saceed Jalili, ayaa dalbaday in wadamada dhanka quwadda ugu horeeya dunidu ay ogaadaan in Iran ay xaq u leedahay inay naaxiso macdanta uranium-ta
Mareykanka iyo xulufadiisa ayaa ku eedeeya Iran in ay kor u qaaday heerka naaxinta macdanta uranium-ta, taasoo qeyb ahaan ay si qarsoodi ah ugu sameyneyso hubka nuclearka. Tehran ayaa ku celcelisa in barnaamijkeeda nuclearka uu yahay mid nabadeed.